मोबाइल फोनको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक | लगातार समाचार
Home जीवन/ शैली मोबाइल फोनको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक
मोबाइल फोनको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक
२० माघ २०७६, सोमबार १०:५४
काठमाण्डौं, माघ २० । मोबाइल फोनको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ। धेरै मोबाइल चलाउँदा टाउको दुख्ने आँखा दुख्ने जस्ता समस्या पनि देखिन्छन पनि।
अझ मोबाइलको भाइब्रेसनले स्वास्थ्यमा नपुंशक हुने, क्यान्सर हुने भन्नेजस्ता हल्ला पनि चलेका सुनिन्छन। तर के वास्तविकता त्यस्तै हो त ? फोनको रेडियसनसँग नजिक हुदाँ यसले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको खतरा उत्पन्न गराउँछ गराउन्न भन्नेबारे मत विभाजित छ।
घातक भन्ने बित्तिकै मानिसहरुमा ‘रेडियसन’ प्रति त्रासको भाव पैदा हुने गरेको छ। केही रेडियसनले कोशिका तथा डीएनएलाई क्षति पुर्‍याउँछ। जसले क्यान्सरको खतरा समेत निम्त्याउँने विशेषज्ञहरु बताउँछन।
रेडियसन के हो ?
रेडियसन भनेको वरिपरीको वातावरणमा उत्सर्जन भएका ऊर्जा तरंगहरु हुन्। मोबाइल फोनको हकमा रेडियसनको कुरा गर्दा ‘इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसन’ भन्ने बुझिन्छ।
यसरी हेर्दा क्यान्सर उत्पन्न गराउने अल्ट्रा भायोलेट अर्थात् युभी रेडियसन पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसन नै हो। यसकारण पनि धेरै मानिसहरु मोबाइल फोनको रेडियसनलाई क्यान्सरसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
घामबाट आउने अल्ट्रा भायोलेट किरणले जब छालालाई छेडेर डीएनए रहेको सेलभित्रको स्थानमा पुग्छ तब क्यान्सर उत्पन्न गराउँछ।
समयसँगै यसले डीएनएमा असर गर्छ र कोशिका नै प्रभावित बन्छ । शरीरमा नयाँ कोशिका उत्पादन गर्न डीएनएको विशेष भूमिका हुन्छ। तर डीएनएमा नै क्षति पुगेपछि नयाँ बन्ने कोशिका पनि दुषित हुन्छन्। यसरी दुषित कोशहरु बढ्दै गएपछि यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ।
तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने मोबाइलफोनबाट उत्सर्जन हुने युभी रेज फरक हो। एक्स रे, युभी रेज तथा विभिन्न किसिमका हानिकारक रेडियसनलाई आयोनाइज गरिएको हुन्छ। मोबाइल फोन तथा डेस्क ल्याम्पहरुमा प्रयोग हुने रेडियसनलाई आयोनाइज गरिएको हुँदैन।
यसकारण अधिकांश वैज्ञानिक तथा विज्ञहरु मोबाइलबाट उत्सर्जन हुने रेडियसन घरको रेडियटर जस्तो हुने र यससँग डराउनु नपर्ने बताउँछन्। यसर्थ मोबाइलको भाइब्रेसनकै कारण क्यान्सर र मानिसको मृत्यु जस्ता विषय अतिरञ्जनापूर्ण भएको विज्ञहरु बताउँछन।
१ अर्ब नाघ्यो विण्डोज १० अपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता
रंगशाला निर्माणका लागि धनधान्याचल महोत्सवबाट ५० करोड उठाउने लक्ष्य
आज २०७८ साल बैशाख १ गते बुधवारको राशिफल
१ बैशाख २०७८, बुधबार ०५:३८
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ०५:४३
आज २०७७ साल चैत्र २९ गते आइतवारको राशिफल
२९ चैत्र २०७७, आईतवार ०५:३६
२७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:०५
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०६:०१
लकडाउनबारे गलत हल्ला भयो: प्रधानमन्त्री
मलाई सरकार ढल्छ भन्ने कुनै चिन्ता छैन: प्रम ओली
राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा गण्डकी सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता
२४ घण्टामा थप ६०३ जनामा संक्रमण पुष्टि
भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीलाई कोरोना सङ्क्रमण
दक्षिणी इजिप्टमा बस पल्टिँदा २० को मृत्यु, तीन घाइते